सरकारले हेर्दे दृष्टिकोण फरक छ
अरनिको यातायात सेवा समिति
– आज ४६ औं वार्षिक उत्सव तथा साधारण सभा विशेष रुपमा मनाउन गईरहनुभएको छ, फरक के छ ?
हाम्रा अग्रज तथा संस्थापक अध्यक्ष डा.सुरेन्द्रको पालादेखि लिएर म आउने बेलासम्म पनि भदौ १५ गते समितिको वार्षिक उत्सव मनाउँदै आएको छ । भदौ १५ गतेलाई वार्षिक उत्सव मनाउने संस्थाले सिस्टम नै राखेको छ । र मेरो कार्यकालमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन आगामी भदौ १५ गते नै समितिको ४६ औं वार्षिक उत्सव तथा वार्षिक साधारण सभा राखेको छु । यो संस्था अन्य संघ संस्थाहरुभन्दा विल्कुल फरक छ ।
– १५ गते नै साधारण सभा राखेर फरक हो कि अन्य कुनै विशेषताहरु छन् ?
यस अघि हाम्रा अग्रजहरुले जुन नीति नियम लागु गरे त्यहि अनुसार अहिलेसम्म आएका अध्यक्षहरुले त्यसलाई पछ्याउँदै आएको छ । मेरो कार्यकालमा पनि यसै नीति नियमलाई पछ्याउने क्रममा भदौ १५ लाई नै रोजेको हुँ ।
– ४६ वर्षसम्म आइपुग्दा यस समितिका उतारचढाव, यात्रुहरुलाई दिएको सेवासुविधाको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
यसका धेरै चुनौती र समस्याहरु छन् । यहाँसम्म आइपुग्न समितिले धेरै चुनौती र समस्या पार गरेको छ । यसले गरेका कामहरुको बारेमा बयान गरेर साध्य नै छैन । समितिले राज्यले गर्नुभन्दा पहिले नै आफ्नो संस्थाको लागि हरेक संघ संस्था, राजनीतिक दल, प्रशासनिक निकाय, सरोकारवाला व्यक्ति एवं हरेक सँग सहकार्य गरेर यसले आफ्नो पहिचान राख्न मेहनत गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छ ।
– तपाईको नेतृत्वमा यो वर्ष केही फरक गर्दैहुनुहुन्छ ? विशेष गरेर यात्रुहरुले केही प्राप्त गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो कार्यक्रमको उद्घाटन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा नेपाल सरकारको प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले गर्नुहुनेछ । कार्याक्रममा वार्षिक प्रतिवेदन, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिवको प्रतिवेदनहरु यथावतै रहनेछन । यसवर्ष निर्वाचन नभएकोले यसपटक हामीले जितबहादुर भारतीलाई स्वर्णपदकद्धारा सम्मानित गर्दैछौं । अर्काे जेष्ठ व्यवसायलाई पनि सम्मान गर्दैछौं । त्यसैगरी २०७४ सालको एसईई परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुलाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी हामीलाई सहयोग गर्नुहुने विभिन्न संघसंस्थालाई पनि सम्मान गर्दैछौं । यसवर्ष व्यवसायीको हितको लागि भनेर चिठ्ठाको कार्यक्रम पनि आयोजना गरेका छौं ।
– पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा समस्या बढीे, व्यवसायीहरु असुरक्षित भए, लगानी असुरक्षित भए जस्ता गुनासाहरु आइरहेका छन्, अरनिको यातायात सेवा समितिमा त्यस्ता गुनासाहरु छ कि छैन ?
व्यवसायीहरुको गुनासोहरु नहुने भन्ने होइन । हुन्छन् । गुनासाहरुलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि डिटेन कसरी कम गर्ने, मुनाफा कसरी कमाउने, व्यवसायीको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने लगायतका विषयमा अहिलेको मेरो कार्यसमिति सबै लागिपरेको छ । वर्षाको समयमा गाडीहरु जान नसकिने कारण क्युहरु घटाएको हुन्छ । हिउँदमा २०० क्युहरु चलेको हुन्छ भने वर्षामा आधि पनि चल्दैनन् । यसले गर्दा आम्दानी कम हुन जान्छ । हिँउद लागेपछि खुलेका सडकहरुमा हामी सबै ठाउँमा सेवा विस्तार गर्छाैं । यसले केही राहत दिनेछ ।
अर्काे कुरा जुन सरकारको नीति छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भन्ने गरिन्छ । जहाँसुकै गाडी छोड्ने गरेको छ । यसले गर्दा गाह्रो छ । हामीले दिइरहेको सेवा र अहिले आएको साझा यातायातको सेवामा धेरै फरक छ । साझाले ग्रामीण सडकहरुमा सेवा दिन सकिरहेको अवस्था छैन ।
– यात्रुले भनेको समयमा सेवा नपाउने तर गाडीहरु भने डिटेन बस्ने भन्ने जुन गुनासो सुन्नमा आइन्छ नि ?
कुनै ग्रामीण सडकमा एउटा गाडी पठाए पुग्ने ठाउँमा अर्काे गाडी पठाउनु व्यर्थ हुन्छ । त्यस्तै ८–१० जना मात्र यात्रुहरु हुन्छन् । कतिपय यात्रुहरु एकछिन गाडी पाएन भने गाडी नै छैन भन्ने महसुस गर्न थाल्छन् । अन्य ठाउँहरुमा रुट अनुसार हाम्रो गाडी चलिरहेकै अवस्था छ । तर यात्रुवर्गले एक छिन ढिला भयो भन्दैमा गाडी नै नभएको समस्या राख्छन् । सबै ठाउँमा गाडी पुग्ने गरी राखिएको छ । हामीले दशैंको समयमा पनि यात्रुवर्गको सुविधाको लागि पर्याप्त गाडीको व्यवस्था गर्दै आएका छौं ।
– यात्रुहरुको कहिले भाडा छुट सम्बन्धी, कहिले पुरानो गाडी सम्बन्धीलगायतका समस्या कम गर्ने सम्बन्धी केही सोचिरहनुभएको छ ?
भाडाको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले नेपाल सरकारले तोके बमोजिम नै लिने हो । हामीले गाडीहरुमा भाडा लिष्ट पनि दिएका छौं । टाँस्नको लागि निर्देशन पनि दिएका छौं । भाडा बढी त लिनु नपर्ने हो । कहिलेकाहिँ विद्यार्थी परिचयपत्रको छुटको विषयमा गुनासाहरु आउने गर्छ । विद्यार्थी सहुलियत पनि हामीले दिँदै आइरहेका छौं ।
– कहिलेकाहिँ यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार तथा सिण्डिकेटको कुराहरु पनि आउने गर्दछ, के अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको हो ?
केही समय अगाडि एकाधिकार ग¥यो, सिण्डिकेट ग¥यो भन्ने आउँथ्यो । तर अहिले १–२ वर्षको अवधिमा यो सुन्नमा आएको छैन । किनभने अरनिको यातायातले संचालन गरेको मन्थली रामेछाप । रामेछापमा १४÷१५ समितिको गाडीहरु जान्छन् । त्यहाँ एकाधिकार कहाँ रह्यो ? हामीले विहान ५ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म आलोपालो गरी गाडीहरु पठाइरहेका छौं । यसलाई एकाधिकार भन्न मिल्दैन । जसले विहान ७ बजे गाडी छोड्यो त्यसपछि गाडी दिनभरी नै छोडेन भने त्यो एकाधिकार भयो । भाडाको कुरा गर्नुपर्दा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको भाडा लिएका छौं ।
– सरकारले यातायात क्षेत्रमा हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक छ भन्ने गुनासो आउँछन् नि ? पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको नीति नियमले केही असर पारेको छ ?
सरकारले यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै नै फरक छ । सरकारले हामीलाई हरेक ठाउँबाट जस्तै भाडामा पनि विद्यार्थी छुट, अपाङ्ग छुट, वृद्धलाई छुट लगायत धेरै ठाउँमा छुट गर्दै गएको छ । तर सरकारले हामीसँग लिने राजस्व भने बढाउँदै लगेको छ । बिलबुक रिन्यू, जाँचपास, कर तिर्नुपर्ने, वीमा गर्नुपर्ने, त्यस्तै परेमा रुट परमिट समेत खारेज गर्ने गरेको छ । त्यो मात्रै नभएर अहिले सरकारले गाडीको छत पनि हटाउने निर्णय गरेको छ । यो कत्ति सम्मको जायज हो ? छतमा मान्छेहरु बसेर पनि होला तर केही समय यता छतमा मान्छेहरु बस्न छाडिसकेका छन् । बरु बसेका छन् भने जरिवाना गर्ने बरु । छतको साइज घटाउन सकिन्छ बरु । यसको समाधानको लागि कुनै एउटा कार्यदल वा कमिटी बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई ।
– गाडीको छत हटाउने सरकारको निर्णयले यात्रुहरुहरुको पनि सुरक्षा भइरहेको जस्तो लाग्दैन ?
विगत १, २ वर्ष अघिदेखि यातायातमा धेरै परिवर्तनहरु आइरहेको छ । छतमा यात्री राख्ने कुरा धेरै कन्ट्रोलमा आइसकेको छ । सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण मात्र फरक हो । एकदुई ठाउँमा घटना घटेपछि सरकारले यसलाई कडा पनि गरेको थियो । त्यसपछि यात्रुहरु बिल्कुलै छतमा बसेको छैन ।
– अब आगामी दिनमा अरनिको सेवा समितिले व्यवसायी र यात्रुका हितका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरु रहेका छन् ?
हामीले यात्रुका लागि सुविधा दिने भनेको सफा राम्रो गाडी नै हो । व्यवसायीको लागि पनि हामीले कसरी मुनाफा कमाउन सकिन्छ ? कसरी यात्रुको मन जित्न सकिन्छ ? भन्नेमा मेरो कार्यसमितिको टिम लागिपरेको छ । कुनैठाउँमा नयाँ रुट खुल्यो भने त्यो रुटमा हामीले गाडी पठाएर हुन्छ कि सरोकारवालासँग छलफल गरेर, त्यहाँका प्रशासनिका निकाय, जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता, नागरिक समाजहरु, राजनैतिक दल आदिसँग सहकार्य गरेर यो भन्दा अझ कसरी व्यवसायलाई मुनाफा दिलाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी लागेका छौं ।
– केही महिना अघि सम्म पनि अरनिको यातायातले छतमा मान्छे हालेको देखेको स्थानीयवासीले बताउँछन्, यहाँहरुले बताउँदा बताउँदै पनि किन मानिरहेका छैनन् गाडीका स्टाफहरुले ?
हामीले नीति नियम बनाएका छौं । कसैले देखेमा तुरुन्त टिकटमा भएको नम्बरमा फोन गरेमा हामीले तुरुन्त त्यो गाडीलाई कारवाही पनि गर्छाैं । स्टाफलाई कारवाही गरिन्छ । हाम्रो पनि नीति नियमहरु रहेका छन् । तर हामीलाई सूचना प्रवाह गर्नुप¥यो ।
मलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण राजनैतिक दल, प्रशासन, नागरिक समाज, पत्रकार सरोकारवाला व्यक्ति, सहयोगी संघसंस्था सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
प्रकाशित मिति: 31 August, 2017